Shock Absorber Zvikamu
Mudhudhudhu Shock Absorber
Inner Tube,Outer Tube
Coilover & Mhepo Kumiswa
Resistant & Speed
Zvishandiso zvekusimudza uremu
Mabhawa & Makorasi
Ndeipi mitengo yako?
Mitengo yedu inogona kuchinja zvichienderana nekupa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Isu tichakutumira iwe yakagadziridzwa mutengo runyorwa mushure mekambani yako kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Iwe une hushoma hwekuodha huwandu here?
Ehe, isu tinoda kuti maodha ese epasirese ave neinoenderera yehuwandu hwekuodha huwandu. Kana iwe uri kutsvaga kutengesa asi muhuwandu hudiki, tinokurudzira kuti utarise webhusaiti yedu
Unogona here kupa magwaro akakodzera?
Hongu, tinogona kupa zvinyorwa zvakawanda zvinosanganisira Zvitupa zveAnalysis / Conformance; Inishuwarenzi; Origin, uye mamwe magwaro ekunze panodiwa.
Ndeipi avhareji yenguva yekutungamira?
Kune sampuli, nguva yekutungamira inenge mazuva manomwe. Pakugadzirwa kwemazhinji, nguva yekutungamira ndeye 20-30 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti yekubhadhara. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) isu tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzedu dzekutungamira dzikasashanda nenguva yako yekupedzisira, ndapota pfuura zvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kudaro.
Ndedzipi mhando dzenzira dzekubhadhara dzaunogamuchira?
Unogona kubhadhara kubhengi account yedu, Western Union kana PayPal:
30% dhipoziti pachine nguva, 70% chiyero chinopesana nekopi yeB/L.
Chii chiri chigadzirwa waranti?
Isu garandi zvinhu zvedu uye magadzirirwo. Kuzvipira kwedu ndiko kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune waranti kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa zvese zvevatengi zvinogutsa munhu wese.
Iwe unovimbisa zvakachengeteka uye zvakachengeteka kuendesa zvigadzirwa?
Ehe, isu tinogara tichishandisa emhando yepamusoro ekisipoti packaging. Isu tinoshandisawo yakasarudzika njodzi kurongedza kune zvinhu zvine njodzi uye yakatenderwa inotonhora yekuchengetedza inotakura kune tembiricha zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-yakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwe mari.
Zvakadini nemari yekutumira?
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express ndiyo nzira inokurumidza asi zvakare inodhura zvakanyanya. By seafreight ndiyo yakanakisa mhinduro kune yakakura mari. Chaiyo mitengo yekutakura tinogona kukupa chete kana tichiziva ruzivo rwehuwandu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Nzira yekusarudza yakakodzera shock absorber...
Mhando dzakasiyana dzeShock absorber -coilover
Ruzivo rwekutanga rwekuvhunduka-2
Ruzivo rwekutanga rwekuvhunduka-1
Building No.2, Jinshan Road No.788, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang, China
7 Mazuva pavhiki kubva 10:00 am kusvika 6:00 pm
TIZIIWO EMAIL YAKO UYE TICHABATIKANA PASATI 24 HOURS